သင်၏အရောင်းနှင့်စျေးကွက်တည်နေရာကိုအကဲဖြတ်ရန်မေးခွန်း ၅ ခု | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 19, 2009 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2014 Douglas Karr
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဖောက်သည်အားကောင်းစွာသိရန်နှင့်ထုတ်ကုန် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုသည်သူနှင့်အံ ၀ င်စားပြီးရောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ပတေရုသ Drucker
အရင်းအမြစ်များကျဆင်းလာခြင်းနှင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေသူအတွက်အလုပ်များများလာခြင်းကြောင့်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုကိုစိတ်ထဲစွဲမှတ်ထားရန်ခက်ခဲသည်။ နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ထမ်းဆိုင်ရာပြ,နာများ၊ အီးမေးလ်များကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ရက်၊ ဘတ်ဂျက်နှင့်ကျန်းမာသောစီးပွားရေးတစ်ခု၏သော့ချက်မှထိခိုက်နစ်နာစေသူများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုင်တွယ်သည်။
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိုပါကသင်၏အစီအစဉ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပြီးသင်၏အရင်းအမြစ်များကိုမည်သို့အသုံးချနေသည်ဆိုသည်ကိုဆက်လက်ဖော်ပြသင့်သည်။ သင့်အားပိုမိုထိရောက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်သို့ ဦး ဆောင်ရန်ကူညီရန်မေးခွန်း ၅ ခုရှိပါသည်။
သင်၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်သင်၏မန်နေဂျာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသော ၀ န်ထမ်းများလား။ သင်ဆက်သွယ်နေသောစာတိုပေးပို့မှုကိုသတိပြုပါ သင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်နှင့်အတူ? အထူးသဖြင့်သင်၏ဖောက်သည်အသစ်များနှင့်အတူစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျှောက်လုံးမျှော်လင့်ချက်များကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ အလွန်အကျွံမျှော်လင့်ချက်များသည်ဖောက်သည်များ ပို၍ ပျော်ရွှင်စေသည်.
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ် သင့်ရဲ့အရောင်းဝန်ထမ်းများရောင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူအောင် သင်၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုလော အကယ်၍ မရရှိလျှင်သုံးစွဲသူတစ် ဦး ကိုပြောင်းလဲရန်အပိုလမ်းပိတ်ဆို့မှုများကိုသင်ဆန်းစစ်။ ၎င်းတို့ကိုကျော်လွှားရန်နည်းဗျူဟာများထည့်သွင်းရမည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, အဖွဲ့နှင့်ဌာနဖြစ်ကြသည် သင်၏အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုနှင့်လိုက်ဖက်သည် သို့မဟုတ်သူတို့နှင့်ပconflictိပက္ခဖြစ်? သာဓကတစ်ခုမှာ ၀ န်ထမ်းများအတွက်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားရည်မှန်းချက်များကိုချမှတ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ န်ထမ်းများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုအမှန်တကယ်လျှော့ချပေးပြီးသင်၏ retention marketing အားထုတ်မှုကိုအားနည်းစေသည်။
သင်အရေအတွက်ကိုတွက်ချက်နိုင်ပါသလား စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာပါ သင့်ရဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုချင်းစီအဘို့? များစွာသောစျေးကွက်သမားများသည်အလုပ်လုပ်နေသည့်အရာကိုအတိအကျတိုင်းတာရန်နှင့်နားလည်ရန်ထက်တောက်ပသောအရာဝတ္ထုများကိုဆွဲဆောင်သည်။ ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်ဖို့ဆွဲငင်အားလေ့ရှိပါတယ် ကဲ့သို့ လုပ်ပေးထက်လုပ်ဖို့။
သင်ဆောက်လုပ်ပြီးပြီလား သင်၏စျေးကွက်မဟာဗျူဟာ၏လုပ်ငန်းစဉ်မြေပုံ? လုပ်ငန်းစဉ်မြေပုံသည်သင်၏အလားအလာများကိုအရွယ်အစား၊ စက်မှုလုပ်ငန်း (သို့) အရင်းအမြစ်အလိုက်ခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကန့်ကွက်မှုများအားအဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။ ထို့နောက်ရလဒ်များကိုဗဟိုရည်မှန်းချက်အနည်းငယ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန်သင့်လျော်သောတိုင်းတာနိုင်သောနည်းဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။
Tags: alignment ကိုန်ထမ်းပြည်တွင်းရေးစျေးကွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး alignment ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ရောင်းအားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပconflictိပက္ခစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်မှန်းချက် alignment ကိုစျေးကွက်ရည်မှန်းချက်စျေးကွက်ဗျူဟာမက်ဆေ့ခ်ျကို alignment ကိုပတေရုသ DruckerPeter drucker ကိုးကားရောင်းအား alignment ကိုအရောင်းနှင့်စျေးကွက်အရောင်းစွမ်းအားရောင်းအားစျေးကွက်ရှာဖွေရေး alignment ကို
မတ်လ 20, 2009 မှာ 10: 31 AM
မင်းငါ့ဘာသာစကားပြောနေတာပဲ လူတွေဘာကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်မရှိတာလဲ၊ ပြက္ခဒိန်ကလုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငါလုံးဝနားမလည်ခဲ့ဘူး။ ဖြစ်စဉ်များကိုသူတို့မွမ်းမံပြီးအဆက်မပြတ်တိုးတက်နေသမျှကာလပတ်လုံးအလုပ်လုပ်ကြသည်။ လူတစ် ဦး သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ကြိုးစားရာတွင်အလွယ်တကူလက်လျှော့အရှုံးပေးသည်။ မကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ဘယ်လောက်များများပျက်စီးသွားသလဲ။
ကောင်းသော post! အထူးသဖြင့်တော့မင်းလိုငါတွေးနေရင်! :)
မတ်လ 20, 2009 မှာ 11: 37 AM
ဤသည်မည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်တဆင့်အလွန်ကြီးစွာသောလမ်းလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်အသစ်များကိုရှာဖွေနေသည်။ ဤဘလော့ဂ်သည်ငါ့အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
မတ်လ 23, 2009 မှာ 10: 05 pm တွင်
အရောင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များပြည့်မီရန်နံပါတ် ၂ သည်အရေးကြီးသည်။ ငါသူတို့ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဟုခေါ်သည့်နေရာများ, အရောင်းကာကွယ်တားဆီးရေးအဖွဲ့မြင်ကြပြီ!
Mr. Drucker ၏ကိုးကားချက်မှာအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ စကားပြောဆိုမှုသည်ဖြစ်သင့်သည်
ရောင်းအား၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစျေးကွက်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ အရောင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုစျေးကွက်သို့တင်စရာမလိုပါ။